गलत तिमी, चरित्रहीन म ? |
गलत तिमी, चरित्रहीन म ?
प्रकाशित मिति :2019-04-01 14:32:28
केही दिन अघि महिला खबरमा प्रकाशित उन्नती चौधरीको म ननभर्जिन केटी शीर्षकको लेखले ध्यान तान्यो । अनि आफ्नो पनि अनुभव बाँड्न मन लाग्यो ।
म हरेक पटक अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न जाँदा मेरो नाम थर र उमेर लेखिएको कार्ड हेरेपछि :
डाक्टर : तपाईंको कतिजना बच्चाबच्ची छन् ?
डाक्टर : मतलब, नभएको कि सुर नै नगर्नु भएको ?
म : होइन । छैन भनेपछि छैन ।
डाक्टर : किन, लाज मान्नु भएको हो कि क्या हो ? अहिलेको जमानामा पनि लाज मान्नुपर्छ र ?
म : मेरो विहे नै भएको छैन । किन लाज मान्नु !
(यसपछि डाक्टरले ‘सरी’ भन्नुपर्छ भन्ने ठान्दैन र भन्दैन । मलाई भित्रभित्रै रिस उठ्छ । ‘अब तँसँग कुरा गर्दिन’ भनेर उठ्न मन लाग्छ । तैपनि थेचरिएर चुप लाग्छु ।)
गाडीमा यात्रा गर्दा सँगै सिटमा बसेको अपरिचित पुरुष :
बहिनीको/ दिदीको घर कहाँ हो ?
म : धादिङबेशी ।
ऊ : माइती नि ?
ऊ : श्रीमान कहाँ छन् ? के काम गर्छन् ?
ऊ : बित्नुभएको हो कि ? (जिब्रो लेब्राएर ) कि आफैले छोड्नुभयो ?
म : (कडा स्वरमा ) मैले विहे नै गरेको छैन ।
ऊ : विहे नगरेपनि के भयो र अहिलेको जमानामा । ‘इन्जोय’ गर्ने साथी त हुँदै होलान् ?
(उसले मलाई ‘इन्जोय गर्ने साथी’ भन्नुको मतलब ‘रसरंग गर्ने केटासाथी’ भनेको हो भन्ने बुझ्न कुनै गाह्रो छैन । “वेश्या” ठान्दैछ सायद । किनकी घरि घरि आफ्नो शरीर म तर्फ भारि बोकाउन ल्याउँछ । एक पटक त यस्तै कुराकानी पछि मेरो स्तनमा कुहिनाले धकेल्ने र थिच्ने गर्यो । मैले झपारे पछि उठेर पछाडीको सिटमा बस्न गएको थियो । तैपनि उसले ‘सरी’’ भनेन ।)
अरु बेलामा म भित्रभित्रै मुर्मुरिन्छु । उसलाई चिथोरुँ जस्तै लाग्छ । कराउँछु । झपार्छु । गाडीका अरु कसैले मलाई साथ दिँदैनन् । त्यसपछि चुपचाप बस्छु ।
कतै कार्यक्रममा जाँदा :
पाका उमेरका अपरिचत व्यक्ति
नानीको बोली साह्रै मन पर्यो । राम्रो बोल्नुहुँदो रहेछ । निकै लच्छिनको हुनुहुँदो रहेछ ।
म : धन्यवाद आमा/ बुबा ।
ती व्यक्ति : श्रीमान के काम गर्नुहुन्छ नानी ? बच्चाबच्ची कति जना छन् ?
म : मेरो त विहे नै भएको छैन ।
ती व्यक्ति : ए ! एक बारको जिन्दगी रमाइलो गरेर मात्र जाँदैन । विहे त गर्नुपर्छ, गर्नुस् है । छोरीमान्छेको लच्छिन भनेको पुरुष हो (श्रीमान) । ‘केटा साथी’ त होलान् नि !
(यहाँ मलाई सोधिएको केटा साथी ‘लभवाला ब्वाय फ्रेण्ड’ हो भनेर बुझ्न मलाई कुनै गाह्रो हुँदैन । ‘छोरीमान्छेको लच्छिन भनेको पुरुष हो’ भन्ने वाक्य कानमा ठोक्किन्छ र टाउको दुख्छ । अनि अघि भर्खर ‘निकै लच्छिनको हुनुहुँदो रहेछ’ भन्ने वाक्यको अर्थ खोज्न थाल्छु ।)
माथिको तीन घटना मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पटक पटक दोहोरिएको छ । म पक्का छु, अब पनि दोहोरिन्छ ।
हिजोआज जँचाउन जाँदा अस्पतालको ढोकाबाट भित्र छिरेपछि अब यही प्रश्न आउँछ भनेर मेरो दिमाग रन्थनिन्छ । डाक्टरकोमा पुगेपछि जब म आफ्नो स्वास्थ्य समस्या खुलेर बताउँछु त्यसपछि डाक्टरले मेरो रोगको निदानको कुरा पहिले गरोस् भन्ने आशा राख्छु । तर, अहिलेसम्म मैले सोचेझैं भएको छैन ।
डाक्टरले पारिवारिक कुरा पनि जान्न आवश्यक होला । तर किन कतिवटा बच्चा छ ? भन्ने प्रश्नबाट शुरु गर्छन् । र, किन आफुले सोधेको कुरा गलत भएपछि माफी माग्दैनन् ?
विहे नभएका महिला पनि उपचारको लागि आएका हुन्छन् भन्ने किन सोच्न सक्दैनन् ?
मलाई जुन आसयले प्रश्न गर्ने डाक्टरले मेरै उमेरको अर्को पुरुषलाई पनि त्यसैगरि सोध्ला ? पक्कै सोध्दैन ।
केही घण्टाको लागि यात्रा गर्ने कुनै पुुरुष यात्रुले किन ‘तिम्रो श्रीमान कहाँ छ ?’ भन्नेबाट कुरा शुरु गर्छ । तिनका लागि यो जरुरीको विषय हुँदै होइन । अर्को कुरा आजसम्म मैले यात्रा गर्दा महिलाले सँगैै सिटमा बसेको पुरुषलाई यस्ता बेअर्थी र सरोकार बाहिरको प्रश्न सोधेको सुनेकै छैन । न त स्वयंले सोधेको छु ।
पुरुषलाई लाग्दो हो कि यस्तो कुराकानी गर्दा महिलाले रमाइलो मान्छन् । वा श्रीमान कहाँ छ ? भन्ने थाहा पाएपछि जिस्काउन पाइन्छ, या पिछा गर्न सजिलो हुन्छ । प्रायः पुरुषको सोचाइमा महिला भनेको ‘खेलौना’ मात्रै हो ।
५०/६० कटेका पाका मान्छेका लागि विहे गरेका छोरीमान्छे मात्रै ‘लच्छिन’का हुन्छन् । दिनहुँ पिटाइ खान परेपनि उनीहरुको लोग्ने हुन जरुरी छ । विहे नभएका छोरीमान्छे लच्छिनका हुँदैनन्, ‘चरित्रहीन’ हुन्छन् ।
यी भोगाइ महिलाप्रति हेरिने समाजको ऐना हो । आज पनि समाजले २५ वर्ष पार भएकी छोरीमान्छेको विवाह भएको छैन भने कुनै ‘दोष’ भएर नै विवाह नभएको भन्ने अड्कल काट्छ ।
३० वर्ष पार भएपछि त विहे हुने कुरै भएन । समाजले ‘विहे गर्नु नै सबैकुरा पाउनु हो’ भन्ने सिकायो । न कि शिक्षा, ज्ञान, अनुभव र रोजगारी । १६ वर्ष टेकेपछि छोरी हुर्की भन्ने समाजमा ३५ वर्षको हुँदा नि विहे नगर्ने म ‘ननभर्जिन, वेश्या, चरित्रहीन र अलच्छिना’ हुने नै भएँ ।
यो कुरा मलाई समाजले मात्र भनेको छैन । आफ्नै आफन्त र नातागोताका भित्रका मान्छेले पनि भनेका छन् । म सानैदेखि राजनीतिक संगठनमा आवद्ध भएर कार्यक्रमहरुमा जान्थें । उतिबेला देखि नै आफन्तहरुले मेरी आमालाई ‘छोरी वेश्या भएर जाली है’ भनेको बिर्सिएको छैन ।
२०६४ सालबाट स्थानीय एफएममा काम गर्न गएँ । त्यतिबेला पनि केही मान्छेहरुले आमासँग ‘त्यस्तो ठाउँमा काम गर्ने मान्छे राम्रो हुँदैनन् । छोरीलाई किन पठाएको ?’ भने भन्ने थाहा पाएँ ।
अहिले महिलाको मानवअधिकारको लागि पैरवी गर्छु । महिलामाथि हुने विभेद, शोषण र अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउँछु । फेरि पनि नजिकका आफन्त र चिनेजानेका मान्छेहरुले नै ‘त्यस्तो काम गर्ने मान्छे राम्रा हुँदैनन्’ भनेको पटक पटक सुनेकी छु ।
अन्य क्षेत्रका विद्वान हुँ, बुद्धिजीवी हुँ भन्नेहरुले पनि ‘अधिकारकर्मीहरु चरित्रहीन हुन्छन्’ भनेका कुरा हरेक दिनजसो बजारको चोक, चिया पसल र सडकमा सुनेकी छु । तर सुनेको नसुन्यै गरि हिँडिरहेको छु ।
उनिहरुलाई म चरित्रवान भएको देखाउन मलाई जरुरत छैन । हो, छोरीमान्छे बोल्नुहुँदैन भन्ने समाजमा म ठूलो स्वरले बोलें, बोल्छु । छोरीमान्छे ठूलो स्वरमा हाँस्नु हुँदैन भन्ने समाजमा ठूलो स्वरले हाँसे, हाँस्छु ।
छोरीमान्छे एक्लै हिँड्नुहुँदैन भन्ने समाजमा प्रायः एक्लै हिँड्छु । साँझ परेपछि निस्फिक्री बजार डुल्छु । एक्लै फिल्म हेर्न जान्छु । जे जे गर्नुहुँदैन भनेको छ त्यही त्यही गर्न मन लाग्छ, गर्छु ।
यही कारणले मेरो चरित्र र यौनिकतामाथि कसैले प्रश्न गर्छ भने म होइन तीनै हुन् चरित्रहीन । ‘मर्द हुँ’ भन्ने कुनै पुरुषले भन्दा सयौं गुण इमान, नैतिकता, अनुशासन, शिष्टता र सद्विचार सिकेको छु, निभाएको छु । त्यसैले म आफूप्रति स्वयं गौरव गर्छु ।
सयौं वर्षदेखि पित्तृसत्ताले शासन गर्दै आएको हाम्रो समाजले छोरीमान्छेलाई ‘मान्छेको दर्जा’ नै दिएन । छोरीको पनि मन हुन्छ । छोरीलाई पनि हाँस्न मन लाग्छ । कहीं जान मन लाग्छ । छोरीले पनि साथी बनाउन हुन्छ भन्ने सोच्दै सोचेन ।
छोरीलाई आफ्नो खुशी आफैंले रोज्न पाउने अधिकार दिएन । जन्मेदेखि मृत्युको दिनसम्म अर्कैको नियन्त्रण । अर्कैको खटनपटन । खुट्टामा संस्कारको साङ्लोेले बाँधेर कैद गर्दै आयो ।
त्यसको विरुद्धमा उभिदै अहिले केही छोरीहरुले बोल्न खोजे । आफैले निर्णय गर्न चाहे । आफ्नो खुसी आफैले खोज्न चाहे । तर, चरित्र नामको हतियारले रेट्ने छोडिएको छैन । यद्यपि म ‘चरित्रहीन’ को उपमा लत्याउँदै अस्तित्वका लागि लड्न छोड्ने छैन ।